ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွင် ရိုးရာကစားနည်းများ မြောက်များစွာရှိခဲ့ပေသည်။ ဘာသာတရားကို အခြေခံသော ကစားနည်းများ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံသော ကစားနည်းများ၊ ဓလေ့ထုံးစံအရ ကစားနည်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ချို့သော ကစားနည်း များသည် ယခုခေတ်တွင် ကွယ်ပျော ...
မြန်မာ့ရိုးရာ အတိုင်းအတာ၊ အချင်အတွယ်များကို ယနေ့ထက်တိုင် အသုံးပြုနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ Central Intelligence Agency ၏ Factbook အရ မြန်မာနိုင်ငံသည် International System of Units metric system ကို မသုံးပဲ ရိုးရာနည်းသာ သုံးသော နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံထဲမှ တစ်ခု ...
ပျူခေတ် ခရစ်နှစ် ၈၀၁-ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းတွင် ပျူဘုရင်၏ သားတော် သုနန္ဒ ဦးဆောင်သော ပျူတေးဂီတအဖွဲ့ သရေခေတ္တရာမှ တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ချန်အန်သို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပုံကို တရုတ်မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် ဂီတပညာရှင်များ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၃ ...
ဘုရင်တို့ ထိုင်သော နေရာ ခုံ ဖြစ်သည်။ အနိမ့် ၊ အမြင့် ပမာဏကို လိုက်၍ ရာဇပလ္လင် ၃ မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ - ၈ တောင်ရှိသော မဇ္ဈိမပလ္လင် ၄ တောင်ရှိသော စူဠပလ္လင်တို့ ဖြစ်သည်။ ၁၆ တောင်ရှိသော မဟာပလ္လင် ပလ္လင် တစ်ခုတွင်ခြင်္သေ့ ၊ ဆင်ပျံ ၊ လောက ...
ရုပ်သေး ဆိုသည်မှာ ခေါင်း၊ ခြေ၊ လက် စသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတို့ကို လှုပ်ရှား၍ လူ့သဏ္ဌာန် ဟန်အမူအရာနှင့် ကပြနိုင်စေရန် စီမံပြုလုပ်ထားသော အရုပ်များဖြင့် ခင်းကျင်းကပြခြင်းကို ခေါ်သည်။ ကမ္ဘာ့ရုပ်သေးသဘင်တွင် အကြမ်းအားဖြင့် ရုပ်သေး လေးမျိုးလေးစား ...
ရေကုသိုလ် သည် နွေရာသီ ခရီးသွားများအတွက် ရေအိုးပိုက်ကာ ရေလိုက်လှူကြသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အညာကျေးလက် ရိုးရာဓလေ့ ဖြစ်သည်။ အညာအရပ်ဘက်သို့ သွားသော မီးရထားခရီးသည်များ အတွက် သောက်ရေလှူဒါန်းသောဓလေ့ ဖြစ်သည်။ အများစုသော ရေကုသိုလ် အလှူရှင်များမှာ ဆင်းရဲသောမိန် ...
ရေချမ်းစင် ဟူသည် လမ်းသွားလမ်းလာ သောက်ရေလိုအပ်သူများအတွက် အချိန်မရွေး သောက်သုံးနိုင်ရင် လမ်းဆုံ၊ ဇရပ်၊ သစ်ပင်ရိပ် စသည့် နေရာများတွင် ထားရှိပြီး၊ ရေကောင်းရေသန့်အိုးလိုက် ဖြည့်ပေးထားသော ရေသောက်ရန်နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ချစ်စရာကောင်းသော မြန်မာဓလေ့များထဲ ...
ရှေးဟောင်းပုံပြင်များတွင်လည်းကောင်း၊ လူကြီးသူမများ အဆင့် ဆင့် ပြောကြားချက်အရလည်းကောင်း ရေသူမများ ရှိသည်ဟူသော စကားကို ယခုခေတ်တိုင်အောင်ပင် စွဲလမ်းယုံကြည်သူများ ရှိနေသေးသည်။ ထိုယုံကြည်ချက် အရဆိုသော် ရေသူမများ၏ ဦးခေါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လှပသောလူမိန ...
မြန်မာနိုင်ငံထုတ် သဘာဝအလှပြင်ပစ္စည်း သနပ်ခါး အနှစ်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အစောပိုင်းတွင် သနပ်ခါးခဲ တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ အမှတ်တံဆိပ်သက်တမ်း ၄၅ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်တွက် သနပ်ခါး အရည်၊ အမှုန့ ...
သင်းကျစ် ဟူသည်ကား လက်ယာနားပန်မှ လက်ဝဲ နားပန်တိုင်အောင် နဖူးပြင်ကို ပြည့်စေလျက် ဆင်ယင်ရသော မင်းတို့၏အဆောင်အယောင် မင်းမြှောက်တန်ဆာတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ရွှေစင်အတိ ပြီးသောဟူ၏။ ဘုရားအလောင်းတို့အား လက်ယာနားပန် တိုင်အောင် နဖူးပြင်ကိုပြည့်စေလျက် အသားလွှာတက်သေ ...
သန်လျက် ဆိုသည်မှာ ရှေးအခါက မြန်မာဘုရင်များ ကိုင်စွဲရသော လက်နက်၊ မင်းဆောင်မင်းယောင် မင်းခမ်းမင်းနားများတွင် အသုံးပြုရသော လက်နက်ဖြစ်သည်။ မင်းမြှောက်တန်ဆာ ငါးပါးတွင် သန်လျက်သည် တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မင်းခမ်းတော်များတွင်လည်း သန်လျက်ကို လင်္ကျာမင်းခမ ...
ဘွဲ့တံဆိပ်ဟူသည် အလှူကိုခံယူထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့၏ အမှတ်အသားအဆောင်အယောင်များ ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို အလှူခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အကျင့်အာစာရ ရှိခြင်းဟူသော သီလဂုဏ်၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ခြင်းဟူသော သမာဓိဂုဏ်၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် အစွမ်းသတ္တ ...
သူငယ်တော် ဟူသည် အနောက်ဆောင်တော်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော သန့်ရှင်းရေး အမှုထမ်းများ ဖြစ်သည်။ ရွှေနန်းသုံး ဝေါဟာရ အဘိဓာန်က ဗဒုံမင်း လက်ထက် ၁၁၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင်မှ ပေါ်သော အမှုထမ်းဟု ဆိုသည်။ သူငယ်တော် ဟူသော ဝေါဟာရသည် သက္ကရာဇ် ၉ဝဝ ကျော်ကပင် ရှိနေပြီ ဖ ...
ရှင်ဘုရင်တို့ကထုတ်သော အမိန့်တော်များ၊ လွှတ်တော်မှ ဘုရင့်ထံတင်သွင်းသောစာများကို တစ်ဆင့်ဖတ်ကြားခြင်း၊တင်လျောက်ခြင်း၊ ဆင့်ဆိုခြင်းပြုရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သံတော်ဆင့်ဟု မြန်မာမင်းများလက်ထက်က ခေါ်တွင်သည်။ လွှတ်တော်မှသွင်းသောစာ၊ လွှတ်တော်သို့ထုတ်ရန်စာများက ...
မြန်မာအချိန် စနစ် သည် ယခုကာလ စက်နာရီများကဲ့သို့ တစ်ရက်ကို သန်းခေါင်မှ သန်းခေါင် တိုင်းတာခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ တစ်ရက်မှာ တစ်နေ့နှင့် တစ်ည ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ ဆိုသည်မှာ နေထွက်မှနေဝင်ထိ ဖြစ်ပြီး တစ်ည ဆိုသည်မှာ နေဝင်မှ နေထွက်ထိ ဖြစ်၏။ မြန်မာနာရီအားဖြင့ ...
အနောက်ပွဲတက်ဆောင် ဆိုသည် မြန်မာမင်းတို့၏ နန်းတော်တိုင်းတွင် အနောက်စမုတ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ရှိသော အရှေ့ဘက်တွင် သုံးထပ်ဇေတဝန်ဆောင်ကို ခေါ်သည်။ အနောက်ပွဲတက်ဇေတဝန်ဆောင်တော် ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ထိုအဆောင်တွင် သီတင်းကျွတ်သောအခါ မိဖုရား၊ မင်းသမီး၊ ကတော်၊ မယားစ ...
စကားပြောရာ၌လည်းကောင်း၊ စာရေးသားရာ၌လည်းကောင်း အနက်အဓိပ္ပာယ် ထင်ရှား စေရန် တင်စား၍ ပြောဆိုရေးသား ထားသော စကားကို ဥပစာ စကားဟုခေါ်သည်။ ခိုင်းနှိုင်းပြော ဆိုသော စကား၌ နှိုင်းချက်ရှိရသည့်အတူ တင်စားပြောဆိုသော စကား၌လည်း တင်စားချက်ရှိရသည်။ တင်စားချက် ရှိသေ ...
လင်းနို့လူသား ဆိုသည်မှာ DC Comics မှဖြန့်ချိသည့် အမေရိကန်ရုပ်ပြကာတွန်းတွင် ပါဝင်သော ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်ကောင်ကို အနုပညာရှင် Bob Kane နှင့် စာရေးဆရာ Bill Fingers တို့က ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် Detective Comics #27 တွင်ပထမဆုံးပါဝင်သည်။ "လ ...
သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇော သည် အီရန်နိုင်ငံထုတ် ပါရှန်ကော်ဇောများထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သဗ်ရီးဇ်မြို့တွင် ရက်လုပ်သည်။ ဤမြို့သည် အီရန်နိုင်ငံတွင် ကော်ဇောရက်လုပ်ရာ၌ ထင်ရှားသောမြို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းမြို့ထွက် ကော်ဇောများသည် အရောင်အသွေးဒီဇိုင်းများ စုံလင်လှသည်။ သဗ်ရ ...
Wham! သည် အင်္ဂလိပ် ပေါ့ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့၍ အဆိုတော်နှစ်ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဂျော့ မိုက်ကယ် နှင့် အန်ဒရူး ရစ်ချ်လေ တို့ဖြစ်ကာ ၁၉၈၁တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဘွတ်ရှီမြို့၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ပြည့်နှစ်များ၌ ပေါ့ဂီတဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအရ အ ...
စတော်ဘယ်ရီ ပရင့်စ် ဂျပန် ဂီတအဖွဲ့ ထို့အပြင် စုတိုပုရိ အဖြစ်လူသိများ အတိုကောက်ဖြစ်ခဲ့သည် အုပ်စု 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်
ဆရာဉာဏ် တေးရေးဆရာ မောင်မောင်လတ် တေးရေး ဝင်းမင်းထွေး ထာ၊ ဆရာတေးရေးဆရာ လေးညွန့်၊ ကိုတေးပညာရှင် တောက်၊ ဆရာတေးရေးဆရာ ညီသစ် ကမ္ဘာ ဂီတပညာရှင် အောင်ကိုး၊ ကို ချိုတေးဆက်
မောရမ်ဘွမ် တီးဝိုင်းအဖွဲ့ ကို မောရမ်တောင်တန်း သံစုံတီးဝိုင်း ဟုလည်း သိကြပြီး အဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှာ အမျိုးသမီး ဖြစ်ကြသည့် မြောက်ကိုရီးယား ဂီတအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များကို နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်က ရွေးချယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အောလန်ဆိုင်း သည် စကော့ဘာသာစကားဖြင့် ၁၉၇၈ တွင် "ရောဘတ် ဘားန်ဇ်" ရေးသားထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ ရိုးရာကျေးလက်သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် စီမံဖန်တီးခဲ့ကြသည် ။ နိုင်ငံအတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံများတွင်အလွန်လူသိများသောတေးတစ်ပုဒ်လည်းဖ ...
ကြာဆံဟင်းခါး သည် သရေစာအဖြစ်ရော ဟင်းအဖြစ်ပါ စားသုံးကြသော အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ချက်ပြုတ်ရ လွယ်ကူပြီး ဝယ်စားပါက ဈေးသက်သာပြီး နေရာတိုင်း နီးပါးရနိုင်သော အစားအစာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အချို့က ကြာဇံချက်ဟု ခေါ်ပြီး တချို့က ကြာဇံဟင်းခါးဟု ခေါ်ကြသည်။ ကြာဇ ...
ထိုးမုန့် သည် မြန်မာ့ရိုးရာ အချိုပွဲ စားစရာမုန့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုးမုန့်ကို ကောက်ညှင်းဆန်အပါအဝင် စပျစ်သီးခြောက်၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ အုန်းသီးကြော်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိုးမုန့်နှင့် အလားတူသော မြန်မာ့ရိုးရာ အခြားမုန့်များမှာ မုန့်ကုလားမဲနှင့် ပုသိမ်ဟာ ...
မြီးရှေ သည် ဆန်ခေါက်ဆွဲနှင့် အသားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော မြန်မာအစားအသောက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မြီးရှေအမည်သည် တရုတ်စကားလုံး 米線Mixian မီရှန့် မှဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ရှာလပတ်ရည် သည် အနောက်အာရှနှင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တို့တွင် လူသောက်များပြီး သစ်သီးနှင့် ပွင့်ဖတ်တို့မှ ထုတ်သည့် ဖျော်ရည်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရသာမှာ ချိုပြီး အအေးခံကာ သောက်လေ့ရှိသည်။ ရေနှင့် ဖျော်၍ မသောက်လိုက ခပ်ပျစ်ပျစ်လုပ်ကာ ဇွန်းနှင့် ခပ်စားနိုင်သေးသည ...
ကာလီဒါသ သည် သင်္သကရိုက် စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာဖြစ်သည်။ ဒရာမာဆန်သော အရေးအသားများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ သူ၏ ပြဇာတ်၊ ကဗျာများမှာ မဟာဘာရတ၊ ပုရာဏ၊ ရာမာယဏနှင့် ဝိဒါသ စာများကို ကိုးကား ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြောက်ဖျားနေ ကချင်သွေးချင်းများသည် ကချင်၊ ခုန်ချင်၊ တီးမှုတ်ချင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်သည်။ အတီးအမှုတ် အကအခုန်ကို ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်များ၌ အသုံးပြုကြသည်။ တီးမှုတ်ကြသည်။ သီဆိုကြသည်။ ကချင်ရိုးရာတူရိယာများသည် ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်လူမ ...
ကြေးစည်သည် ဃနတူရိယာဟု ခေါ်သည့် တခဲနက်စည်များတွင် အဝင်အပါဖြစ်သော တူရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကြေး ကိုမူတည်ကာ ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ကြေးစည်ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ကြေးစည်သည် သာယာငြိမ့်လေး၊ ကြည်အေးသော အသံကို ဆောင်သည့်ပြင် ကြေးစည်သံကို အဝေးမှ ကြားနိုင်သဖြင့် ဗုဒ္ဓအယူ ...
အခေါင်းပါသောသစ်သား သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကို သားရေဖြင့်ပိတ်၍ တင်းအောင်ကြက်ပြီးလျှင်၊ ထိုသားရေမျက်နှာ ပြင်ကို လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တုတ်တံ၊ လက်ခတ် စသည်တို့ဖြင့်ဖြစ်စေ တီးခတ် အသံမြည်စေသော တူရိယာများမှာ စည်ဖြစ် သည်။ စည်သည် လူတို့ ရှေးဦးစွာပြုလုပ်သုံးစွဲခ ...
ယခုခေတ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ဂီတ တူရိယာများတွင် စန္ဒရားသည် လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အရေးအပါဆုံးသော ကြိုးတပ်တူရိယာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ကြိုးတပ်တူရိယာဟုပင် ဆိုသော်လည်း၊ စန္ဒရားမှာ အခြားသောကြိုးတပ်တူရိယာများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ခလုတ်နှိပ်ယန္တရားတပ်ဆင်၍ တီးရ ...
ပလွေသည် လူအများစုနှင့် အတွေ့ထိဆုံး တူရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အလွယ်ရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပလွေမှုတ်သည့် ပညာမှာ တိမ်မယောင်နှင့် နက်လှသည်။ ဝါးကို သံစဉ် စနစ်တကျ ဖောက်၍ မှုတ်ရသော တူရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အိုးစည်ဝိုင်းများ၊ ဆို ...
သတ္တဝါတို့ နေရာဘုံ ၃၁-ကို အကြောင်းပြုကာ ဆိုင်းဝိုင်း၌ ဗုံ ၃၁-လုံးကို ပြုလုပ်စီမံကြောင်းနှင့် မှတ်သားမိဘူး၏၊ ဤ၌ လေတူရိယာ၏ သံမှန် ၂၁-ပေါက်ကို မူလအခြေခံထား၍ ဆိုင်းဝိုင်း၌ ဗုံ ၂၁-လုံး သွင်းစီကာ ဝိုင်းအပြင်၌ ၁၀-လုံးထားလျက် ပေါင်း ၃၁-လုံးဟု မှတ်ရာသည်၊ ...
ဘင်ခရာဟူသော ဝေါဟာရသည် ဘင်နှင့် ခရာခေါ် တူရိယာ ၂ မျိုးကို အလိုက်သင့် တွဲခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘင်သည် အနောက်နိုင်ငံသုံး တီးစရာ တူရိယာဖြစ်၍ ခရာသည် မှုတ်စရာတူရိယာဖြစ်သည်။ ယင်းတူရိယာ ၂ မျိုးကို တွဲဖက်၍ တီးမှုတ်သော တူရိယာသမားများ အဖွဲ့ကို ဘင်ခရာ တီးဝိုင ...
ဘင်ဂျို သည် ကြိုးနှင့် သားရေ ပေါင်းစပ်ထား၍ လက်ဖြင့် တီးခတ်ရသော တူရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဌာန် အားဖြင့်သော်ကား သစ်သား၊ သို့မဟုတ် သတ္တုခွေ ဝိုင်းအပေါ်၌ သားရေပြားပါးပါး ကြက်ထားသည့် စည်မျက် နှာတွင် ၂ ပေခန့်ရှည်လျားသော လက်တံတပ်ထားသည်။ စည်မှာ တစ်ဖက ...
ပါးစပ်ဖြင့် မှုတ်ရသည့် သံစုံတူရိယာကလေးကို ဘာဂျာ ဟုခေါ်သည်။ ပါးစပ်မှုတ် ဘာဂျာဟူ၍ လည်းကောင်း တစ်ခါတစ်ရံ ပြင်သစ်စောင်း ဟူ၍ လည်းကောင်း ခေါ်ကြသည်။ ယင်းကို လူသိများရုံမက ကလေး သူငယ်တိုင်းလိုလိုပင် မှုတ်တတ်ကြသည်။ အဖိုးပေါသည့်ပြင် လေ့ကျင့်ရန်လည်း လွယ်ကူလှ ...
ကချင်သားချင်းများသည် မနောစည်ကို အထွတ်အမြတ်ထားကြသည်။ ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲများ၌ တီးခတ်လေ့ရှိသည်။ ဤစည်ကို မနောတိုင်များ၏ အလယ် တည့်တည့်တွင် ချိတ်ဆွဲပြီး မနောကသောအခါ ရှေ့ဆုံးမှ တီးခတ်ရသည်။ မနောကွင်း အလယ်တွင် ကခုန်နေသော သွေးချင်းကချင်များအတွက် ကကြိုးလှစ ...
မောင်းသည် မြန်မာအဘိဓာန်တွင် ကြေးစသည်ဖြင့်သွန်းလုပ်ထားသော အသံမြည်ဟည်းအောင် ထုနှက်တီးခတ်ရသောပစ္စည်းဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထား၏။ ရှေးခေတ်အခါက ရှင်ဘုရင်၏ အမိန့်တော်များကို အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မောင်းတီးပြီး ကြေငြာပေးရသည်။ ခွက်ခွင်းစည်စော ...
လေတူရိယာစုတွင် ရှေးဦးစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သော တူရိယာမှာ ရိုးရိုးပြွေပင်ဖြစ်လေသည်။ ပြွေသည် အခေါင်းပါသောဝါးနှင့် အလားတူပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်ထားသည့်တူရိယာဖြစ်၍ အခေါင်းကို လေဖြင့် မှုတ်ကာ အသံဖြစ်စေရသည်။ နောက်တွင် ထိုတူရိယာဖြင့် အသံနိမ့် အသံမြင့်များဖြစ်စေရ ...
Bullet for My Valentine သည် Bridgend မှ Welsh heavy metal တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းကို Matthew Tuck Michael Paget, Michael Thomass နှင့် Jamie Mathias တို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဖွဲ့အဟောင်းထဲတွင် Nick Crandle နှင့် Jas ...
S.H.E သည် ထိုင်ဝမ် မိန်းကလေး ဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စလင်းနာ ၊ ဟီဘီ နှင့် အဲလာ တို့ ပါဝင်သည်။ အဖွဲ့အမည်မှာ ၎င်းတို့သုံးဦး၏ အင်္ဂလိပ်အမည် Selina, Hebe, Ella တို့ကို အစွဲပြုကာ မှည့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး တေးစီးရီးကို ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မ ...
မက်တယ်လစ်ကာ အဖွဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ဟဲဗီးမက်တယ်လ် ဂီတအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တီးဝိုင်းကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တွင် အဆိုရှင် ဂစ်တာသမား ဂျိမ်းစ်ဟက်ဖီးဒ် နှင့် ဒရမ်သမား လားစ် အူးရစ်ချ် တို့မှ တည်ထောင်ခဲ့ ...
2 tone သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် Jerry Dammers နှင့် The Specials တို့ဦးဆောင်သော ၁၉၅၀ ska ရှင်သန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ska ဂီတနှင့် punk rock ဟန်ပန်တို့ကို ရောနှောထားခြင်းဖြစ်သည်။ Dammers တည်ထောင်ခဲ့သော record label မှ လာခဲ့ဖြစ်သည။2tone Records သည် သာ ...
Alternative dance indie dance သည် electronic dance ဂီတနှင့် အတူကွဲပြားသော rock မျိုးခွဲများနှင့် ရောနှောထားသည်။ ၁၉၈၀ တွင် New Order တီးဝိုင်း၏ American တွင်တင်ဆက်မှုနှင့် ၁၉၉၀တွင် The Prodigy နှင့် Bjork တီးဝိုင်းတို့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကို တွေ ...
Alternative rock သည် သည် rock ဂီတ၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ တွင် independent music underground မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ တွင် ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ alternative သည် mainstream rock ဂီတမှ ကွဲပြားသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် distorted gu ...
﻿ Anarcho-punk သည် မင်းမဲ့ဝါဒကို ထောက်ခံသော punk rock အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ anarcho punk ဟူသော ဝေါဟာရသည် ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် အင်္ဂလန်မှ မူလ anarcho-punk ရွေ့လျားမှု အသုံးချခဲ့သော တီးဝိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ တစ်ခါတ ...
Anti-folk unfolk) သည် ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ ကြိုးပမ်းထားသည့် ၁၉၆၀ ခုနှစ် folk ဂီတတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ anti-f၀lk ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို အသိအမှတ်ပြုဖော်ပြရန်ခက်ခဲ့သည်။ အနုပညာရှင်တစ်ဦးမှ အခြားအနုပညာရှင်တစ်ဦးထိုမှတစ်ဆင့် အခြားအနုပညာရှင်မျာ ...
Appalachian ဂီတ သည် အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်း Appalachia နယ်ပယ်မှ ဂီတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကွဲပြားသော ဥရောပနှင့် အာဖရိကလွှမ်းမိုးမှုများမှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် ballad၊ အိုင်ယာလန်နှင့် စကောတလန်ရိုးရာဂီတ၊ ဓမ္မသီချင်းနှင့် အာဖရိက အမေရိက blues တို့ပါဝင်သည ...